Umatshini wokukhuphela umbhobho wePVC - Qiangsheng Plastic Machinery co., Ltd.
Yasekwa ngo-2000, Zhangjiagang City Qiangsheng Plastic Machinery co., Ltd umenzi ezikhethekileyo koomatshini zeplastiki. Ifunyanwa kwi-78 Baixiong Road, Sanxing, Jinfeng Town, Zhangjiagang City, Jiangsu kwiPhondo, China. siyakonwabela ukuthuthwa okufanelekileyo. Inkampani yethu ithatha indawo ye-8,000 m2 kwaye inezixhobo eziphambili ze-screw-extruder ephindwe kabini, i-single-screw extruder, iiseti zemigca yokuvelisa kunye nezixhobo ezincedisayo.
Ngephepha-mvume lokuthumela kwelinye ilizwe, sithumela iimveliso kumaphondo angamashumi amabini anethoba, izixeko kunye nemimandla ezimeleyo kwaye zithunyelwa eRashiya, eAfrika, eMpuma Mpuma nakuMzantsi-mpuma Asia. Ulawulo lomgangatho olungqongqo lwenziwa kuyo yonke inkqubo ukusuka ekufuneni izinto, ukuqhubekeka kunye nokuvavanywa ukupakisha.
1. Umbhobho wezimbiwa we-PE Phakathi kwazo zonke iiplastiki zobunjineli, i-HDPE ineyona nto inxiba kakhulu kwaye iyabonakala. Ukuphakama kobunzima beemolekyuli ...
Imibhobho ye-PVC ithatha imibhobho ye-PVC-U yokuhambisa amanzi, enziwe nge-polyvinyl chloride resin njengeyona nto iphambili ekrwada. Ziyongezwa nge-additi eziyimfuneko ...